MAGRO BEHORIRIKA : NIARAHABA AN’I DADA NOHO NY FETIN’NY RAY – MyDago.com aime Madagascar
MAGRO BEHORIRIKA : NIARAHABA AN’I DADA NOHO NY FETIN’NY RAY
Totorebika, hafaliana, no taratra teny amin’ireo zanak’iDada androany teny amin’ny Magro Behoririka. Hetsika lehibe tokoa no niseho teny an-toerana, ho fanamarihana ny fetin’ny Ray, izay hankalazaina rahampitso saingy naroso androany ny an’ny mpomba ny Filoha Ravalomanana. Tonga nandatsa-bato ho an’i Dada teny an-kianja ny filohann’y CT Rakotoarivelo Mamy, ny filoha lefitry ny CST Razafimanantsoa Hanitra, niaraka amin’ireo mpikambana sasantsasany avy ao amin’ny Parlemantera roa tonta avyamin’ny Ankolafy.
Nisy ny vata fandatsaha-bato lehibe izay natao handatsahan’ireo zanak’i Dada ny firariantsoa noho ny fetin’ny Ray ho an’ny Filoha Ravalomanana. Samy nanefa ny adidiny avokoa ireo vahoaka tonga teny an-toerana. Nisy ihany koa ny fizarana mofomamy sy koba nozaraina ho an’ny tsirairay ho mariky ny fifaliana. Ireo mpitarika tonga teny dia samy niaranihira ilay hira hoe Mifankatiava ihany. Ankoatra izay dia nisy ny kabary nifandimbiasana ka anisan’ny nandray fitenenana tamin’izany ny filoha lefitry ny CST Razafimanatsoa Hanitra. Amin’ny ankapobeny dia tsy nisy kabary politika loatra ny kabarin’ireo izay nandray fitenenana. Hafaliana no entintsika hanamarihana ny fetin’ny Ray, hoy Me Hanitra, noho izany dia misaotra ilay Ray tsitoha isika amin’ny nahatongavantsika eto ary ny Filoha Ravalomanana, ahatratra ny fetin’ny Ray rahampitso. Miarahab ny Ray manokana isika hoy Me Hanitra satria fetin’ny Ray rahampitso, satria tsy hary isika raha tsy misy azy. Miarahaba ny Filoha Ravalomanana ihany koa any lavitra any. Enga anie hoy izy omen’Andriamanitra hery soamantsara ary hihaona tsyho ela aminy iska eto Madagasikara. Nambaran’ny Me Hanitra ihany koa fa Rakotoarivelo Mamy no symbole misolo ny Filoha Ravalomanana eto, noho izany maiarahaba azy isika. Mangataka amin’Andriamanitra isika hoy izy mba omeny hery lehibe amin’ny andraikitra sahaniny. Mangataka amin’Andriamanitra mba tsy ho tratry ny aretina amin’ny zavatra izay miandry azy. Enga anie ireo olona manenjika anao mba hitsingidingidina. Niarahaba ireo mpikambana ao amin’ny CT sy CST ary ireo Ray rehetra ihany koa ny tenany.
Ny filohan’ny CT Rakotoarivelo Mamy dia niarahaba ny Ray rehetra ihany koa. Miarahaba anao izahay andriamatoa Filoha amin’izao fetin’ny Ray izao. Matoky izahay fa hiverina tsy ho ela eto Madagasikara ianao, mba hampitraka ireto vahoaka miandrandra anao ireto. Ankoatra izay dia nilaza ny tenany fa nnisy ny taratsy nalefan’ny Sadc izay efa hitantsika tamin’ny gazety ireny. Nilaza ny Sadc hoy Mamy Rakotoarivelo fa tokony hampiharina maika ary ambongadiny ny tondrozotra ary tafiditra ao anatin’izany ny andininy faha 16,17,20. Nekeny Sadc io hoy izy. nilaza ihany koa izy ireo hoy izy fa hihaona tsy ho ela Rajoelina sy Ravalomanana. Mangataka isika ho alohan’ny 26Jona izany fihaonana izany ary eto Antananarivo. Ho hita eo izay amabaran’ny Sdac fa araka ny vaovao heno hoy Mamy dia Rajoelina dia andeha any Bresil amin’ny Alatsinainy. Tsy manaiky ny hamaha ny krizy ny tenany ary tsy sahy mandray andraikitra. Rehefa hihaona ny Filoha Ravalomanana sy Rajoelina dia izay tsy vonona handray andraikitra dia hosazian’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Isika hoy Mamy dia matoky fa tsy saziana fa ilay tondrozotra ny antsika mody ary hilatsaka ho fidiana ny Filoha Ravalomanana
Ankoatra izany dia nisy ihany koa ny tafa fohy nataon’ny filohan’ny CT Rakotoarivelo Mamy, tamin’ny mpanao gazety rehefa nifarana ny fotoana teny an-kianja. Mikasika ny fanambaran’ny Sadc, izay milaza fa izay mampikatso ny fihaonana dia hosaziana. Nambarany fa tsotra ny an’ny Ankolafy Ravalomanana, mazava fa isy ny tondrozotra izay nosoniavin’ny mpanao politika tamin’ny septambra 2011. Ao anatin’izany hoy izy ny fametrahana ny fitoniana politika, sy sosialy eto amin’ny firenena, ny andiny faha 20 izay fahazoan’ireo sesi-tany miverina eto.Madagasikara, tafiditra amin’izany ny filoha Ravalomanana. Izay andininy izay hoy izy dia tsy misy fampiharana avy amin ‘Ingahy Rajoelina sy ny mpomba azy.Koa iza no mampikatso ny raharaham-pirenena. Tsy avy aty aminay ny mampikatso satria matoa izahay manao ny fisintahana amin’ny andrim-panjakan’ny tetezamita izao. Noho izany hoy Mamy dia hangatahanay ny fampiharana ireo andininy ireo. Tsy mangataka avy tsy izay izahay fa raha misy ny tsy fanatantarehana izany dia tomponandraikitra izy ary tokony hosaziana.Mikasika ny hoe ho tratra alohan’ny 26 jona ve ny fihaonana. Nambarany fa milaza Rajoelina fa hamonjy ny sommet Rio+20 any Bresil.Tsy tafiditra amin’izany hoy izy ny tetezamita fa natao hikarakara fifidianana fotsiny.Dika’izany dia tsy zavatra maika ho an’ny vahoaka Malagasy ny fandehanana any fa ny famahana ny krizy politika.Momba ny filazan’ny Ankolafy Ravalomanana fa tsy hanatrika ny 26 jona izy ireo dia nambarany fa mbola sosokevitra mandalo avy aty amin’ny Ankolafy Ravalomanana hatreto. misy hoy izy iny fanambaran’ny biraom-pifandraisan’ny Sdac iny ka mbola hifampidinihana sao misy marimaritra iraisana eo amin’ny mpanao politika, mba tsy hisian’ny sanatrin’ny vava tsotsorimaba isarahana.Misy zavatra maro hoy Mmay misakana ny tenany, ao anatin’izany ny fahatsapany fa tsy misy fahavononana avy any amin’ny Rajoelina hamaha ny krizy fa ny any RIO no mahamaika azy.
Fitsarana Anosy : afaka noho ny fisalasalana « ny zanak’i Dada »
10 pensées sur “MAGRO BEHORIRIKA : NIARAHABA AN’I DADA NOHO NY FETIN’NY RAY”
Radomelina ve hahagaga e! tsy misy afa tsy rendrarendra sy fandaniam-bola no hany mba hainy. Normal izany satria CEPE + 4 ny diplôme-ny ary DJ sy spectacle ny spécialités-ny, porofo hita maso ny fandaniam-bola isan’andro ataony : raha tsy hiteny afa tsy io podium manelingelina sy mitarika havoretràna io aho , fa ho avy ny tsy mety aminao radomelina an, renay fa efa te hitsoaka mafy ianao fa tsy sahy , matahotra an’ ireo foza namanao. Mahatatesa ny valin’ny asan-devolinao
tokony hiala mihitsy raha sahy dia rava ny tatezana lapont;miverina zero dia eo ihany ny hat!tokony tsy mandray karama mihitsy no atao dia malahelo ry zareo @fat dia averiny i dada!izy ihany no filoha eto fa raha tsy mandray karama ianareo dia tambatambazany ary miala izy fa malahelo ;io ve dia hamitahana ny olona magro?gato be io?
ny antoky tsy manaraka ny FR no tokony hiala fa tsy ny mouvansy RAVALO mihintsy ka aoka azava ny resaka
Tokony handinika ihany koa isika mpanohana fa tsy ry Hanitra sy ry Rakotoarivelo izay namantsika no fahavalo.
Samy manana ny fomba fitolomany. Tsy mora ny mijoro sahala amin’ireo. Tsy ny olona mihafina anarana eto amin’ny forum mihitsy no hampiady antsika. Raha hendry dia miseho vahoaka maneho hevitra. Tongava eny amin’ny magro.
Ny mpanongam-panjakana sy ny forongony no fahavalo.
Zo>> Efa eny à Magro alou raha ny tenanay refa mba misy fotoana iny é! aza matahotra fa sady eto zay no any!
Tsy aleo ve atao an’ity mihitsy Ratsimilaho mba hazava ilay resaka important ?
Page 1 sy Page 2 : IZY DAHOLO.
Jereo daholo Jeremy fa betsaka ny resaka momba ny fiverenan’i Dada amin’ny sokajy ara-politika.
19 juin 2012 à 5 h 28 min
verbeeck>> Ok verbeeck, itovizana ! Mitohy ny tolona
19 juin 2012 à 7 h 21 min
werbeck kay lay securite eny am magro sy eto am mydago, fa na dia gardien aza dia tokony mba manankevitra ihany fa tsy fitapitahan’ny ry de8 sy ry Hanitra eo fotsiny e.
Précédent Article précédent : TIKO Andranomanelatra : « tsy azo anaovana barofo »
Suivant Article suivant : FILOHA RAVALOMANANA : TSY NANADINO NY ZANANY NA DIA ANY AN-TANY LAVITRA AZA